Yikuphi ungabahlukanisa tan, okuholela solarium, by zemvelo atholwe ngako phansi kwelanga? Uma siqhathanisa izakhiwo zabo kanye nokubukeka, akukho lutho. Ukuthuthukiswa inqubo lesikhumba nse. Kungakhathaliseki ukuthi bethamele ilanga embhedeni ekhaya ukushuka noma ogwini - ezimweni zombili, isikhumba sibe nsundu uyobheka zemvelo. Tan, ingabe e solarium, zigcinwe kakhulu ngendlela futhi zemvelo tan ngaphandle.
Kungase kuqashelwe ukuthi, ngokungafani solarium Sun ayikwazi acabangele isikhumba sakho hlobo, ayinayo timer, asikwazi zahlelwa. Esimweni, amandla kanye isilinganiso UV-A ray uvumelanise futhi UV-B amabanga, futhi ngokuvamile incike isikhathi sosuku kanye ngonyaka, i-latitude, reflection amandla ukukhanya nokungcola komoya.
izibani Domestic mini solarium unikezwe ray ultraviolet, ukuhlinzeka inhlanganisela olinganiselayo UV-ray ugongolo A no UV-B. Lezi imisebe kuthiwa ngakususi ngokuphelele kungenzeka gamma rays UV-C, okuyinto elimaza emangqamuzaneni omzimba. Rays ikhaya ukushuka ephephile tan zemvelo, futhi ngaphandle kwalokho, yena unalo ithuba lokufeza ukunakekelwa kwesikhumba ngaphambi nangemva ukushuka.
Siphila ezweni lapho ilanga umzimba womuntu awuwona ngempela ngokwanele, futhi solarium yithuba eliyingqayizivele ukusizakala ithonya elihle UV ray ngezinzuzo zezempilo. Tan kuzosiza ukukhulisa izivikeli mzimba zakho, kanye rhinitis, pharyngitis, ukucinana kwemigudu yokuphefumula kanye nezinye izifo zemigudu yokuphefumula , uzobe wadalula ngaphansi. I ukuzungeza igazi kuzokwenziwa ngcono, okuholela synthesis vitamin D ukuphuthumisa amathambo uthole luqina ngokwengeziwe, ukusikeka kanye amanxeba uzoshesha sikhiqize.
Ukushiswa yilanga nethonya elihle isikhumba ethintekile, uma unezinkinga ukhunta noma induna. Ikhaya solarium ongavikela isikhumba phambi naturialnym ilanga tan. Futhi ekugcineni, self-ukushuka ngcono isimo futhi usiza ngilwe nokucindezeleka.
Abantu, ikakhulukazi abesifazane, uthole ilungelo enhle tan ekhaya isikhathi eside. Can iphendukele Folk zokupheka ukuthola tan - ukuqala ukuthatha manganese okugeza noma ukuphuza asanda isibambo isanqante juice, ngenxa carotene ukuthenga segolide isikhumba ithoni, noma ukuthatha blue isibani-ray, okuyinto ziphathwa for imikhuhlane nokuvuvukala. Nokho, kukhona indlela engcono - a solarium ekhaya.
Kukhona okuzenzela mini-Sunroom eyenzelwe ebusweni nasentanyeni, ezixhunywe eziko likagesi. Bamane ukubeka phambi kwakhe etafuleni.
Lokhu imodeli nesibuko ukushuka.
Udinga ukusebenzisa okhilimu esikhethekile ukushuka, kanye izibuko ezikhethekile, ekuvikeleni iso kusukela imisebe eyingozi kubo. Abesifazane badinga ukuba anake impilo yabo webele, qiniseka esehlanganise it nge ekhethekile plastic oyindilinga ofeleba lapho uvakashela solarium ekhaya.
kudivayisi Ngokuvamile Akumangalisi ewusizo - lokhu solarium ekhaya. Kungaba wusizo emndenini. Futhi uma kuziwa ukuthi ke ingasetshenziswa hhayi kuphela ngenxa yokushisa kwelanga, kodwa futhi ukuze ikhule izithombo imifino nezimbali, noma ezikudingayo isilwane ...
Ukuhlanza kubhayela ngezandla zakhe: Amathiphu ochwepheshe
Ukufana Hunting: umthombo othembekile umlilo emvuleni nomoya
Indlela yokwenza VLF ngezandla aphume edayisa izinto?
Ukufakwa panel plastic ezindongeni ngezandla zakhe. Okuhlobisa odongeni sekugcineni
I single-isigaba imitha kagesi ESR-55: Ukubuyekeza, imfundo
Indlu yezitini - nalokho okudliwe.
Gun Okuyisisekelo: nini futhi kuphi kungcono ukusebenzisa?
Indaba efingqiwe: "I Ikhala" Gogolya N. V
Emma Stone futhi Ryan Gosling: A Biography namafilimu ngokuhlanganyela
Formwork Plastic for engadini endleleni. UKUHLOBISA ngoba izindlela engadini ngezandla zabo
Kuyinto injabulo: nezinjabulo phezulu umzimba nomphefumulo
Indlela yokusula amakhukhi ku "Opera" nezinye iziphequluli